Xildhibaan Ilhaan Cumar iyo Madaxweyne Recep Erdoğan oo magaalada New York ku kulmay -
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa ku kulmay magaalada New York ee dalka Mareykanka.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka qeyb geli doona shirka 72aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobey, ee ka furmaya xarunta UN-ka looga taliyo ee ku taala magaalada New York.
Haddaba xildhibaan Ilhaan Cumar iyo marti sharaf ay hogaamineyso ayaa la kulmay Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Hogaamiyayaasha caalamaka ayaa ku soo qulqulaya magaalada New York si ay uga qayb galaan shirka 72aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobey, ee ka furmaya xarunta UN-ka looga taliyo ee ku taala magaalada New York. Qaar badan oo kamid ah hogaamiyeyaasha soo gaaray magaalada New York iyo wafdi ay la socda ayaa kulamo kala duwan la yeelanayey Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Madaxdii uu la kulmay Erdogan ayaa waxaa kamid ahaa xildhibaan Ilhaan Cumar iyo marti sharaf ay hogaamineysay oo iyagu ka safray gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Ilhaan Cumar ayaa ah gabadhii u horeysey ee Soomaali ah, Muslim ah ee Xildhibaan Maraykanka ka noqota.
Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa wargeyska Tusmo Times u sheegtay in ay kulan mudo hal saac socday ay la yeelatay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Ilhaan Cumar ayaa Erdogan ayaa kala hadashay sidii loo hormarin lahaa tobabarka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba xildhibaanada dowlad goboleedyada Soomaaliya.
Sidoo kale xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa kala hadashay Madaxweyne Erdogan sidii ay dowladiisu gacan uga geysan lahayd horumarinta waaxda kaluumaysiga ee dalka Soomaaliya, maal gashiga iyo iskhaashiga ganacsi ee labadda wadan ee Soomaaliya iyo Turkiga.
Arrimaha kale ee ay xildhibaan Ilhaan Cumar iyo Madaxweyne Erdogan ay kulankooda uga wada hadleen ayaa waxaa kamid ahaa in la adkeeyo xiriirka ka dhaxeeya Soomaalida iyo Turkiga ku dhaqan dalka Mareykanka. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa iyadu Madaxweyne Erdogan uga mahadcelisay taageerada iyo caawinaada ay dowladiisu la garab istaagtay musliniinta Rohingya ee laga tirada badan yahay ee xasuuqa lagu hayo.
Madaxweyne Erdogan oo isagu u mahadceliyay xildhibaan Ilhaan Cumar iyo wafdigii la socday ayaa si gaar ah u amaanay hogaan wanaaga iyo sumcad wanaaga ay xildhibaanadu u hordeeday dhamaan muslimiinta ku dhaqan dalka Mareykanka. Madaxweyne Erdogan ayaa xildhibaan Ilhaan ka codsaday in ay cod u noqoto, taageerna ay la garab istaagto walaalaheeda Turkiga.
Madaxdii iyo waftigii kale ee ay xildhibaan Ilhaan Cumar la kulantay ayaa waxaa kamid ahaa Ra’isul wasaaraha dalka Turkiga iyo madax kale oo ka socotay dowladda Turkiga.
Related Items:Featured, Ilhan Omar, Somali community, Somali Minneapolis, world